Tanora mpikatroka Tanzaniana manana vinam-panabeazana mampiaty · Global Voices teny Malagasy
Nanangana klioba i Saul Mwame hisoloany teny ireo mpianatra manana olana ara-pahitana
Voadika ny 25 Oktobra 2019 4:59 GMT
Iray amin'ireo sekoly any Tanzania manana sampana ho an'ny olona manana olana ara-pahitana ny Ambaratonga faharoa DCT Mvumi ho fanohanana ireo mpianatra manana hasembanana ara-pahitana na jamba tanteraka. Afaka miditra amin'ny milina Braille (rafitra teboka nampitomboina ampiasain'ny olona tsy dia mahita mba hametahana soratra) ireo mpianatra 10 na mihoatra manana olana ara-pahitana ao amin'ny sekolin'i Mwame ary afaka mandray an-tsoratra amin'ny Braille amin'ny alàlan'ny soran-tononina miaraka amin'ny fanampian'ny mpiara-mianatra.
Nahita ny fanadihadiana vao haingana notontosain'ny HakiElimu, fikambanana Tanzaniana tsy mitady tombontsoa fa na dia any am-pianarana izay heverina ho “iarahan'ny rehetra” aza, dia mbola tsy namana kokoa ho an'ny mpianatra manan-kilema ara-pahitana ny tontolo fianarana. Vitsy ny sekoly misy ao Tanzania natokana indrindra ho an'ny olona manana kilema isan-karazany.
Na izany aza, mbola miatrika fanamby maro ny sekoly eo amin'ny lafiny fampianarana iarahana sy tsara kalitao. Niasa mba hanatsara ny fampiofanana ataon'ny mpampianatra sy nanangana sekoly manokana ho an'ny mpianatra sembana ny governemanta.
Teraka tao Kibaigwa, Tanzania i Mwame, ary avy amin'ny fianakaviana mahantra. Nilaza izy fa niatrika tsy fahampian'ny fiarahamiasa avy amin'ny vondrom-piarahamoniny manoloana ny vinavinany ho an'ny tontolo fianaràna tsara kokoa ho an'ireo mpianatra manan-kilema ara-pahitana.
Amin'ny maha ambasadaoron'ny Global Youth ho an'i Tanzania amin'ny alàlan'ny TheirWorld, fikambanana tsy miankina momba ny fanabeazana, nanolo-tena hanao fanentanana nandritra ny roa taona momba ny Tanjona 4 ho an'ny Fampandrosoana Lovainjafy: fanabeazana iarahana, tsara kalitao sy mitovy ho an'ny rehetra i Mwame .
Tamin'ny taona 2017, nisolo tena an'i Tanzania nandritra ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny Tanjona ho an'ny Fampandrosoana lovainjafy avo lenta mifantoka amin'ny fampianarana i Mwame.
Ho fanomezam-boninahitra ny asa mafy nataony dia nandresy tamin'ny Loka Printsesy Diana 2019 i Mwamwe, loka omena ny tanora izay mametraka fiantraikany tsara eo amin'ny fiarahamonin'izy ireo. Nanosika an'i Mwame hiasa mafy kokoa izany mari-pankasitrahana izany.